Hoggaamin kaliya ma ahee;Orommo waxa ay awoodaa in ay wadanka dhisto.Abbiyi Axmed. – Warsan iyo Weedh Saxsan!
Jimma(FMN)—Shirweynihii 9aad ee Ururka haya talada deegaanka Orommada ee loo yaqaano(OPDO)ayaa saaka si rasmi ah uga furmay magaalada Jimma ee kutaala koonfurta-galbeed ee dalkaasi ittoobbiya.Shirkan oo uhoggaaminayo guddoomiya xisbiga OPDO ahna ra’isulwasaaraha Ittoobiya Dr;abiyi Axmed ayay ka geybgalayaan kaadiriyiinta xisbiga oo uu ugu horeeyo Lemma Megersa oo ah guddoomiye kuxigeenka xisbigan iyo madaxweynaha maamulka Orommada iyo wakiilo ka socda ururada ay bahwadaagta yihiin.
Asaga oo kahadlayay furitaanka shirka,Abbiyi Axmed waxa uu sheegay in;ay jiraan dad aaminsan in Orommadu aanay dalka haggi karin,waxuuna cadeeyay in hoggaamin un kali ah ma ahee; orommadu ay leedahay karti ay dalka ku dhisto kuna ilaaliso midnimada iyo wada noolaanshaha ummadda reer Ittoobbiya.
Shirka ayaa lagu wadaa in looga arinsado geedisocodka maamulka kililka Orommada ee xisbigan uu gadhwadeenka kayahay,iyadoo ugu danbayntana la filayo in lagasoo saaro go’aano masiiri ah oo ay kamid yihiin wax ka bedelka magaca iyo astaanta xisbigan.
Sikastaba ha noqotee;Orommada ayaa waayihii udanbeeyay waday kacdoon ballaadhan oo ay ku hananayso talada dalka waxna kaga bedelayso siyaasada guud ee dalkaasi waxa ayna wajahayaan loolan adag oo kaga immaanayo dhanka qowmiyadaha kale ee dalkaasi kula dhaqan gaar ahaana Tigreega iyo amxaarada oo iyagu hore uhayn jiray xukkunka dalka.
Previous Habka qorista Curisyada iyo Sheekooyinka.
Next Hirshabeelle iyo DFS oo is Afgarad gaadhay!